पिडौला फर्कने समस्या र यसको उपचार
बिहिवार, अगस्ट 13, 2020
अप्रील 22, 2019 अप्रील 22, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments उपचार, डा. राम बहादुर बोहरा, पिडौला फर्कने समस्या
आजकाल पिडौला फर्कने समस्या धेरै जसोलाई देखिन थालेको छ । यो समस्या जसले भोगेको हुन्छ उसैलाई थाहा भएको हुन सक्छ यसको पिडा । कहिले राति सुतिरहेको अवस्थामै पिँडुला फर्किन्छ । पिँडुलाको मासु सरेर अगाडि भागतिर आउनुलाई पिँडुला फर्किनु भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा निकै सजगताका साथ हातले मिलाएर पिँडुलाको मासु यथास्थानमा फर्काउने गरिन्छ । पिँडुला फर्किएको पीडा केही दिनसम्म रहिरहन्छ । आखिर किन फर्किन्छ पिँडुला ? यसबारेमा जान्न सके यसको उपचार गर्न सहज हुने हाम्रो अनुमान छ ।
स्वाइन फ्लू (Swine Flu) र यसको उपचार
पिडौला फर्कनुको प्रमुख कारण हामीले कमजोर शरीरलाई मानेका छौं भने अर्को कारण शरीरमा पानीको कमिलाई दोषी ठहराएका छौं । केहिको मत शरीरमा पोटासियम कम हुँदा पिंडौला फर्कने समस्या हुन सक्छ भन्ने गरेको पाइन्छ । केरामा अत्यधिक पोटासियम पाइने भएकाले बिहानको नास्तामा दुइवटा केरा एक गिलास दूधसंग खाने गर्नु राम्रो फाइदा हुन थाल्दछ । पातयुक्त तरकारी तथा ड्राई फुड्स लगायत पोटासियमयुक्त खाना खानुपर्छ । डिहाइड्रेसन भएमा पनि पिँडुला बाँउडिने हुन्छ ।
अत्यधिक कमजोरी तथा थकानले पनि पिँडुला बाउँडिने गर्छ । झाडापखाला लाग्दाको कमजोरीमा यो समस्या बढी हुन्छ । लगातारको पखालाले शरीरमा डिहाइड्रेसन भई शरीरमा आवश्यक मात्रामा पोटासियम, खनिज, लवण सञ्चित हुन पाउँदैन र इलेक्ट्रोलाइट असन्तुलित हुन्छ । यो अवस्थामा पानी तथा झोलिलो पदार्थ प्रशस्त पिउनुपर्छ ।
यस्तो समस्या देखिनासाथ औषधिनै खानुपर्छ भन्ने छैन तर कहिलेकाही लामो समयसम्म यो समस्या देखिएमा डाक्टरको परामर्शमा स्पाइनोफेन (Spinofen) नामको यो औषधि १० मि.ग्रामको पावरमा उपलब्ध छ । यो औषधि खायमा राम्रो फाइदा देखिएको छ । यस्ता औषधि १२ बर्षको उमेर भन्दा कम उमेरका बच्चाहरुलाई भने यो औषधि सेवन नगराउनु भनेको छ ।
मात्रा : १ गोली दैनिक सेवन गराउनु पर्दछ ।
← चट्याङबाट कसरी बच्ने ? जनचेतनाको लागि सक्दो शेयर गरौँ
रिकाष्टले आज २ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दै →
फ्रेवुअरी 10, 2019 फ्रेवुअरी 10, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
अगस्ट 6, 2018 अगस्ट 6, 2018 साइन्स इन्फोटेक 4
औषधिको रुपमा धतुराको प्रयोग
सेप्टेम्बर 13, 2019 सेप्टेम्बर 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
व्रत बस्नुको वैज्ञानिक कारण